Mucjiso: Wiil yar oo gacmo la’aan ku dhashay!+SAWIRO | Codka Dalka	Saturday, May 25th, 2013	Home
Mucjiso: Wiil yar oo gacmo la’aan ku dhashay!+SAWIRO
Waxaa dhawaan Magaalada Kismaayo la soo garsiyay Cunug ku dhashay gacmo la,an cunugaan ayaa waxaa lagu magacaaban maxamed hoyadiisna wazaa lagu magacaaba Aamino cali aadan da’diisuna waa 2 sano jir kuna dhashay dagmada sablaale ee gobolka sh.hoose.
Wiilkaan waxaana uu ku dhashay gacmo la’aan qoska uu kadhashayna aad ayay u tabardaran yihiin waxaayna u bahanyihiin gargaar iyo taakulayn.
Wiilka gacmo la’aanta ku dhashay waxaa la yirahaa maxamed ibraahim sidoo kale waxaa xusid mudan in Aabaha dhalay wiilkan gacmo la;aanta ah uu yahay mid isgana curyaan ah(jiis) ah
Haatan waxaa ay hooyadii ay keentay wiilka gacmo la;aanta ah kismaayo si ay ugu hesho kaalmo iyo cid wax u qabata.
Waxaan dhamaan dadka muslimka ah iyo ummada somaliyeed laga codsanayaa in ay wax u qabtaan wiilkan dhibaataysan ee gacmo la;aanta ku dhashay wixii faafaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaan tell-kan +252615952664 oo uu wato caynte cabdi rashiid oo ka mid ah dadka kaalmada u raadinaya qoskaan dhibaataysan.
Xigasho warbaahinta laanta